Degso IObit Driver Booster loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (25.00 MB)
Degso IObit Driver Booster,
IObit Darawalka Booster 8 waa barnaamij bilaash ah oo u oggolaanaya helitaanka darawallada, cusbooneysiinta darawallada iyo rakibidda darawallada bilaa internetka. Waa qalab bilaash ah oo loo diyaariyey inaan ka takhalusno dhibaatooyinka cusbooneysiinta darawalnimada ee aan inta badan kula kulanno kumbuyuutarradeena Windows, waxaana daabacay IObit, oo ah shirkad khibrad badan u leh arrimahaas. Xaqiiqda ah in inteena badani dhib ku qabaan raacida darawaladii ugu dambeeyay ee kumbuyuutarrada oo aanan waqti u haysan karin tani waxay ka dhigeysaa Darawalka Booster mid ka mid ah barnaamijyada ugu muhiimsan.
Soodejiso IObit Darawal Kordhiye
Markaad isticmaaleyso barnaamijka, isticmaaleyaashu uma baahna inay wax badan qabtaan, codsiguna wuxuu helaa darawallada ugu habboon ee kombuyuutarkaaga oo rakibo. Sidan oo kale, waxaad ku hubsan kartaa in darawalada aad u isticmaasho shaqada, ciyaaraha ama hawlgallada multimedia lagu rakibo habka ugu fiican.
Darawalka Kiciye, oo bixiya adeeg bilaash ah oo ku saabsan cusbooneysiinta darawalnimada, cusbooneysiinta darawalnimada duugoobay, cusbooneysiinta darawallada otomaatiga ah, Windows 10 cusbooneysiinta darawalnimada, cusbooneysiinta darawalnimada ee amniga ah iyo darawallada kale ee kombiyuutarka oo badan, ayaa ka badbaadisa isticmaaleyaasha kombiyuutarka dhibaato weyn.
Macluumaadka Darawalnimada Balaaran: Inaad haysato xallinta xun ama tayada codka ee kombiyuutarkaaga? Kuwaan waxaa sababi kara kaar video ah oo duugoobay iyo kaarka codka oo maqan. Waxqabadka ugu fiican ee PC, waxaad u baahan kartaa Darawal Kiciye si aad u cusbooneysiiso in ka badan 4500000 wadayaasha qalabka iyo qaybaha ciyaarta. Dhammaan wadayaasha la soo dejiyey waxay ka yimaadaan websaydhada rasmiga ah ee soo saarayaasha waxayna soo mareen labadaba Microsoft WHQL iyo IObit si loo hubiyo nabadgelyada.
Cusbooneysiinta Darawalnimada Adigoon laheyn Internetka: Waxaa jirtay xaalad aad isku dayday inaad cusbooneysiiso darawalada Kaarka Shabakada si aad ula xiriiri karto markii internetkaagu kaa baxo. Qalabka Cusbooneysiinta Darawalka Khadka Tooska ah ee Darawalka ayaa kaa caawin kara. Waxay bixisaa xal fudud oo ka caawisa pre-soo dejinta wadayaasha. Darawalka Kordhiyuhu wuxuu cusbooneysiin karaa darawalada bilaa internet-ka marka aadan internet ka geli karin.
Hagaaji Arimaha Windows: Waxaa laga yaabaa inaad la kulantay shil nidaam ama arin shaashad buluug ah oo ay sababaan khaladaadka darawallada qaarkood. Darawalka buusterigu wuxuu siiyaa xoogaa qalab waxtar leh si wax ku ool ah loogu xalliyo dhibaatooyinka Windows caadiga ah Waxay hagaajin kartaa dhibaatooyinka shaashadda buluugga ah ee ay sababaan khaladaadka cusbooneysiinta darawalka. Waxa kale oo ay taageertaa hagaajinta inta badan arrimaha maqalka iyo cilladaha shabakadda ee waayo-aragnimada isticmaale wanaagsan.
Cusbooneysiinta Darawalnimada Degdegga ah: Kordhinta Darawalka ayaa adiga kuu ah cusbooneysiiyaha darawalka kugu habboon. Waxay kaa caawin kartaa ogaanshaha iyo cusbooneysiinta darawalada gaboobay si hufan. Sidoo kale, xawaaraha iskaanka ee cusbooneysiiyaha darawalkan waxaa lagu hagaajiyay ku dhowaad 100%; tani waxay ku siinaysaa waqti dheeri ah oo aad ku fahmi karto xaaladda wadista. Waxaad sidoo kale awood u yeelan kartaa cusbooneysiinta darawalnimada otomaatiga ah si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay waqtiga dhabta ah.
IObit Darawalka Kordhiye 8 xoojin;
Cusboonaysiinta darawallada iyo qaybaha loogu talagalay kombuyuutarka ugu fiican iyo waxqabadka ciyaarta
Hal-gujis cusbooneysiin ah oo ka badan 4,500,000 darawallada qalabka ah iyo qaybaha ciyaarta
Rakibaadda darawalka khadka tooska ah ee cusub, cusbooneysiinta qalabka nidaamka soo celinta ama dib u rakibidda
Xawaaraha cusbooneysiinta darawalku wuxuu ku kordhay 30% si ka wanaagsan iyadoo la adeegsanayo khibrad.
Haddii qalad ka dhaco nidaamkaaga inta aad rakibineyso darawalada ay bixiso IObit Darawalka Kiciye, waxaad isla markiiba ku laaban kartaa darawalkii hore si aad uga laabato khaladaadkan ama aad u booqato xarunta soo kabashada si aad u hesho fursado aad u horumarsan.
Waad ku mahadsan tahay horumarka joogtada ah ee keydka darawalka, waxaad dhameystiri kartaa cusbooneysiinta darawalo badan oo aadan ka warqabin adigoon internetka ka baarin, sidaa darteed waxaad hubin kartaa in kumbuyuutarkaagu uu ku shaqeynayo xasilloon oo habsami leh.
Darawalka Kiciye, oo ay isticmaali karaan kuwa aan jeclayn in ay dayactir kumbuyuutar sameeyaan, si ay u otomatigyeeyaan dhammaan howlaha rakibidda darawalnimada, ayaa ka mid ah codsiyada la rabo inay lahaadaan.
IObit Driver Booster Noocyada
Cabirka Faylka: 25.00 MB